ATM တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
date_range 24 June 2017
visibility 37560 Views
ဒီနေ့ခေတ်မှာ သင်ဟာ ATM စက်တွေကို တွေ့မြင်နေကျဖြစ်နေမှာမလွဲပေမဲ့ ATM ရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ ဘာတွေပါတယ်၊ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ထည့်ထားပြီး အဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေကို ဘယ်လိုများထုတ်ပေးသလဲဆိုတဲ့ စူးစမ်းတဲ့ အတွေးမျိုးများ တွေးကြည့်ဖူးလား။ တွေးကြည့်ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အတွေးနဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ ထပ်တူကျရဲ့လား ဆိုတာသိရဖို့ အေတီအမ် စက်တစ်လုံး အလုပ်လုပ်ပုံကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ဒီဆောင်းပါးမှာ တကယ့် စက်တွေအလုပ်လုပ်ပုံကို နည်းပညာစကားလုံးတွေနဲ့ အတိအကျ ဆွေးနွေးတာထက်၊ နယ်ပယ်အစုံက နည်းပညာသမားမဟုတ်သူတွေပါ နားလည်ရလွယ်အောင် ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
၁။ Automatic Teller Machine
အဘိဓါန်မှာ Teller ကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီးထဲကမှ “A person employed inabank to receive or pay out money over the counter” လို့လည်း ဖွင့်ဆိုထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒီတော့ အကြမ်းအားဖြင့် ATM (Automatic Teller Machine) တွေဟာ Teller တဦးလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးနိုင်တဲ့စက်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ATM ကို UK မှာ ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာတပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ စတင်အသုံးပြုစကတော့ နေ့စွဲရိုက်တဲ့ တံဆိပ်တုံးကလို လည်ပတ်နိုင်တဲ့ စာလုံးတွေပါဝင်တဲ့ ဘီးတွေကိုလှည့်ပြီး စာသားတွေပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ CRT / LCD Display များကို အသုံးပြုလာပြီး ကတ်နဲ့ရော ကတ်မပါပဲ အခြား Authentication နည်းစနစ်တွနဲ့ ငွေထုတ်၊ ငွေသွင်းတာတွေအပြင် အခုနောက်ပိုင်းမှာ VTM (Video Teller Machine) ဆိုတဲ့ ဘဏ်မှာ ကိုယ်တိုင်သွားပြီး ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေရသလို ခံစားမှုရစေတဲ့ အသုံးပြုသူဟာ ဘဏ်ရဲ့ Teller နဲ့ ATM မှတဆင့် Video Call ခေါ်ဆိုပြီး Transaction လုပ်နိုင်တဲ့စနစ်ကိုလည်း အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ (မြန်မာပြည်မှာလည်း အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်လာတာနဲ့အမျှ VTM စက်တွေကို မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာ မြင်ရနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ၂၄ နာရီဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မဲ့ Digital Branch တွေဖြစ်လာမှာပါ)
Drive-up (ကားပေါ်မှ အသုံးပြုနိုင်သော) NCR အမျိုးအစား VTM စက်အား အသုံးပြုနေပုံ။
၂။ ATM ထဲမှာဘာတွေပါလဲ
အရင်က ကွန်ပျူတာကို လက်နှိပ်စက်နဲ့ တီဗွီကြီးတွဲထားတာပါကွာလို့ပြောကြတာကြားဖူးကြမှာပေါ့။ ဒီလိုပြောကြေးဆိုရင်တော့ ATM ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ မီးခံသေတ္တာနဲ့ကြီး ပေါင်းထားတာပါလို့ပဲ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ တကယ်လည်း ATM ရဲ့ ပိုက်ဆံပုံးတွေဟာ မီးခံသေတ္တာထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ပိုင်း Top box ထဲမှာ PC Core (ကွန်ပျူတာ) နဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Receipt Printer (ပြေစာထုတ်စက်)၊ Journal Printer (မှတ်တမ်းရိုက်စက်)၊ Card reader (ကတ်ဖတ်စက်)၊ Camera၊ Encryption Pin pad (Pin နံပါတ်အား စကားဝှက်ပြောင်းပေးနိုင်သော Pin pad) နှင့် Touch LCD Display (သို့မဟုတ်) Function Display Key buttons - FDK (Display ၏ဘေး၌ တဖက်လျှင် လေးခုစီရှိသော ခလုတ်လေးများ) အစရှိတဲ့ အခြေခံ စက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပြီး၊ အသုံးပြုမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေါ် မူတည်လို့ အခြား စက်ပစ္စည်းတွေလည်း ထပ်တပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ။ Contactless Card Reader, Barcode Reader, Signature Pad, Passbook Updater, အစရှိသည်ဖြင့်...
စက်ရဲ့အောက်ပိုင်း မီးခံသေတ္တာထဲမှာတော့ ငွေထုတ်ပေးတဲ့ Cash Dispenser Module သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံပေးတဲ့ Cash Deposit Module ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ATM ဆိုတဲ့နာမည်ကို အဓိက ပိုက်ဆံပဲထုတ်ပေးတာနဲ့ အခြား Service တွေဖြစ်တဲ့ ငွေလွဲပြောင်းခြင်း၊ လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးခြင်း၊ လျို့ဝှက်နံပါတ်ပြောင်းခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်တဲ့ စက်ကိုသာ ခေါ်တာဖြစ်ပြီး၊ ငွေစက္ကူထည့်သွင်းလို့ရတဲ့စက်ကိုတော့ Cash Deposit Machine လို့ခေါ်ပါတယ်။ Unit တခုတည်းနဲ့ ငွေလက်ခံတာရော၊ လက်ခံထားတဲ့ငွေကို ပြန်ထုတ်ပေးတာကိုပါလုပ်နိုင်တဲ့ Cash Recycler Module တွေလည်းရှိပါတယ်။ Cash Dispenser ထဲမှာဆိုရင် ခန့်မှန်းခြေ အရွက်ရေ ၂၂၀၀ ခန့်ဆန့်တဲ့ပိုက်ဆံပုံး (Currency Cassette) လေးပုံးနဲ့၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့အရည်အသွေးမပြည့်တာတို့၊ ငွေထုတ်သူ အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ထုတ်ပေးထားတဲ့ပိုက်ဆံကို မယူသွားတာတို့အတွက် အသုံးပြုတဲ့ Reject/Purge Bin ပါရှိပါတယ်။
၃။ ATM ကွန်ရက်
ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဖက်ခြမ်းမှာ တော့ End user device for consumer တွေဖြစ်တဲ့ ATM, ဘဏ်ခွဲ (Branch) နဲ့ Mobile/Internet Banking တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး၊ ညာဖက်ခြမ်းမှာတော့ ဗဟိုကွန်ပျူတာစနစ် (Host) ရှိပါတယ်။ သင် Account ဖွင့်ထားတဲ့ ဘဏ်ခွဲ (Branch) ထဲကိုဝင်သွားပြီး သင့်အကောင့်ထဲကို ငွေထည့်တယ်ဆိုပါစို့၊ Branch မှာရှိတဲ့ Teller က သင့်ငွေသားကိုလက်ခံပြီး သင့် Account နဲ့ ငွေပမာဏကို သိမ်းဆည်းထားတဲ့ Core Banking ထဲကို Branch ကကွန်ပျူတာကတဆင့် စာရင်းထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို စာရင်းထည့်သွင်းပြီးတဲ့အခါမှာ သင့် Account ရဲ့ လက်ကျန်စာရင်းကို ATM မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Mobile Banking ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Internet Banking ကပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်ဆေးလို့ရနိုင်ပြီပေါ့။ ဒါဟာ အထက်မှာရှိတဲ့ပုံအတိုင်း ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ Device တွေက ဗဟိုကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေပုံပါ။
ဒီနေရာမှာ အကျဉ်းချုပ်ပြီး ရှင်းပြလိုတာက Host System ထဲမှာပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါ။ ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ Switch ဟာ ကြားခံစနစ် (Middleware) ဖြစ်ပြီး၊ သူကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိသလို၊ အခြား စနစ်တွေကပဲလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေအတွက် သက်ဆိုင်ရာ စနစ်တွေကို အလည်ကနေ ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ Core Banking ကတော့ အလွယ်ပြောရရင် သင့်ရဲ့ ငွေစုစာအုပ်မှာပါတဲ့ Account နံပါတ်နဲ့ ငွေပမာဏကို သိမ်းဆည်းထားတာပါ။ HSM (Hardware Security Module) ကတော့ သင်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ လျို့ဝှက်နံပါတ်ကို စစ်ဆေးပေးတဲ့ စက်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ATM အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ လုံခြုံရေး Keys တွေကိုလည်းထုတ်ပေးပါတယ်။ Other servers ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ ဘဏ်ကအသုံးပြုတဲ့အပေါ်မူတည်လို့ အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီး၊ ဥပမာအနေနဲ့ CRM (Customer Relationship Management), SD (Software Distribution), Device Monitoring, Cash Foresting, Reconciliation Mobile/Internet Banking အစရှိသည်ဖြင့် ရှိနိုင်ပါတယ်။
ATM စက်ဟာ အသုံးပြုသူရဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ ရယူလိုတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကိုအရင်လက်ခံပါတယ်။ အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းရယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဗဟိုကွန်ပျူတာစနစ် (Host) ကို ပေးပို့လိုက်တယ်။ အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှုရှိမရှိကို ဗဟိုကွန်ပျူတာ (Host) ကနေ စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်တဲ့အခါမှသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် ညွှန်ကြားချက်ကို ပြန်ပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ATM ဆိုတာ နောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့ ဗဟိုကွန်ပျူတာရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အသုံးပြုသူတောင်းဆိုတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးတာပါ။
သင်ငွေစာရင်းဖွင့်ထားတဲ့ဘဏ်ကထုတ်ပေးထားတဲ့ကတ်နဲ့ ATM တွေ ကိုအသုံးပြုပြီး ပြုလုပ်တဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းTransaction တွေကို On-Us Transaction လို့ခေါ်ပြီး၊ သင်က သင့်ဘဏ်ရဲ့ကတ်ကို အခြားဘဏ်ရဲ့ ATM မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Off-Us Transaction လို့ခေါ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် သင့်ကိုကတ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဘဏ်ကို Issuer ဘဏ် လို့ ခေါ်ပြီး၊ သင်က သင့်ကိုကတ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဘဏ်ရဲ့ ATM မှာမထုတ်ပဲ အခြားဘဏ်ရဲ့ ATM အသုံးပြုလို့ ငွေထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကတ်ကို လက်ခံငွေထုတ်ပေးတဲ့ ဘဏ်ကို Acquirer ဘဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ သင်က တခြားဘဏ်ရဲ့ ATM စက်မှာ ငွေထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ Off-us transaction အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Transaction fee ပေးရနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဘဏ်အသီးသီးကို ချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ စနစ်ကို National Switch လို့ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ National Switch ရဲ့အမည်က Myanmar Payment Union (MPU) ပါ။ MPU အကြောင်းမပြောခင် ဘဏ်တစ်ဘဏ်ရဲ့ ကွန်ယက် (Top Level Banking Network ofaBank ပုံကိုကြည့်ပါ) အတွင်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ On-Us Transaction ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။
၄။ သင် ATM ကနေ ပိုက်ဆံထုတ်လိုက်တဲ့နောက်ကွယ်မှာ စက်တွေက ဘာတွေလုပ်သွားလဲ
ATM စက်ကနေ ပိုက်ဆံထုတ်ဖို့ သင်စက်ရှေ့ကိုရောက်နေပြီဆိုပါဆို့။ အရင်ဆုံး ATM ရဲ့ Display မှာ ပြသထားတဲ့ စာတွေကို ဖတ်ကြည့်ဖို့နဲ့၊ စက်ရဲ့မျက်နှာပြင် (Fascia) မှာရှိတဲ့ အချက်ပြမီး (Media Entry/Exit Indicator) တွေကို ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ Indicator မီးတွေကို ကတ်ထည့်ရမဲ့ Card reader နေရာ၊ Pin ရိုက်ထည့်ရမဲ့ EPP, ဖြတ်ပိုင်းထုတ်ပေးမဲ့ Receipt exit နဲ့ ပိုက်ဆံထွက်လာမဲ့ Cash exit shutter door တို့မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ATM စက်ဟာ သင့်ရဲ့ကတ်ကိုလက်ခံဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာဆိုရင် Card Reader ရဲ့ indicator မီးဟာ အချက်ပြနေရမှာပါ။ တနည်းအားဖြင့် သင်ဟာ ATM ရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ Indicator မီးအချက်ပြနေလား အရင် ကြည့်သင့်ပြီး၊ အချက်ပြနေတာကို မတွေ့ရဘူးဆိုရင် Display မှာ ATM Out of service ဖြစ်နေကြောင်းစာသားပြသထားတာဖြစ်နေဖို့များပါတယ်။ အကယ်၍ Card Reader ပျက်နေလို့ Card Reader Indicator အချက်မပြသော်လည်း Cardless Transaction ကို Support လုပ်တဲ့ဘဏ်ရဲ့ ATM စက်သာဖြစ်မယ်ဆိုရင် Display မှာ Cardless Transaction အတွက် အချက်အလက် ဒါမှမဟုတ် ATM In Service ဖြစ်နေမှာပါ။ Online (သို့မဟုတ်) In Service ဖြစ်နေတဲ့ ATM စက်ရဲ့ Display မှာတော့ ဘဏ်ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ကြော်ငြာတွေကို Video သို့မဟုတ် Slideshow ပြသထားလေ့ရှိပါတယ်။
ATM ကတ်ရဲ့ မျက်နှာပြင် တဖက် မှာ Chip ပြား ရှိပြီး နောက်တဖက်မှာတော့ Magnetic Strip လို့ခေါ်တဲ့ အမည်းရောင် အပြားလိုင်းလေးရှိပါတယ်။
ATM ကတ်အရှေ့ခြမ်း (ဘယ်ပုံ)၊ ATM ကတ်အနောက်ခြမ်း (ညာပုံ)
ကတ်ကို ATM ရဲ့ Card Reader ထဲကိုထည့်တဲ့အခါမှာ အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Chip ပါတဲ့ အခြမ်းကို အပေါ်ဖက်မှာထားပြီးထည့်ရမှာပါ။ တကယ်လို့ ပြောင်းပြန်ထည့်မိရင်တော့ Card Reader က ကတ်ကိုဖတ်လို့မရလို့ ကတ်ပြန်ထွက်လာတာ ဒါမှမဟုတ်၊ ဖောင်းကြွစာလုံးရဲ့အထူ သာမန်ထက် ပိုများနေတဲ့ကတ်တွေဆိုရင် ကတ်ညပ်နိုင်ပါတယ်။
ATM စက်အား Card Reader ထဲသို့ ထည့်ပုံ
Chip ကို မြင်ရတဲ့အနေအထား၊ အပေါ်ဘက်မှာထားပြီး ကတ်ကို Card Reader ထဲကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ ATM စက်က သင့်ရဲ့ကတ်မှာပါတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုဖတ်ပါတယ်။ ဘဏ်ရဲ့ အသုံးပြုတဲ့ ATM Software အမျိုးအစားပေါ်မူတည်လို့ ကွာခြားချက်ရှိနိုင်သော်လည်း ယေဘူယျအားဖြင့် ဗဟိုကွန်ပျူတာစနစ် (Host) နဲ့ချိတ်ဆက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် (သို့မဟုတ်) ကြိုတင်ရယူထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းရေးသားထားတဲ့ ပရိုဂရမ်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ထည့်လိုက်တဲ့ ကတ်ဟာ မှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါတယ်။ ကတ်ရဲ့ အချက်အလက် (Data) က မှန်ကန်မှုမရှိရင် ကတ်ကိုပြန်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သိမ်းဆည်းဖို့လိုတဲ့ ကတ်ဆိုရင်တော့ (ဥပမာ။ ကတ်ပျောက်တိုင်ကြားထားတဲ့ ကတ်) ပြန်ထုတ်မပေးပဲ သိမ်းဆည်းလိုက်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာပဲ ကတ်ရဲ့ Data ကိုဖတ်ပြီး On-Us ကတ်လား၊ Off-Us Card လားဆိုတာ စက်က သိရှိသွားပါပြီ။
သင့်ရဲ့ကတ်က မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်တော့ ATM Display မှာ ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ ဘာသာစကားတွေကို ပြသပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာစကားတခုချင်းစီရဲ့ ရဲ့ဘေးဘက်မှာ FDK ခလုတ် ရှိရင် FDK သက်ဆိုင်ရာ FDK ကိုနှိပ်ပြီး ဒါမှမဟုတ် Touch Screen ကိုထိပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာစကားရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့ လျို့ဝှက်နံပါတ်ရိုက်ထည့်ရမဲ့ Screen ကို ATM Display မှာပြသပေးမှာပါ။ လျို့ဝှက်နံပါတ် (Pin နံပါတ်) ရိုက်တဲ့ခါ EPP အပေါ်မှာ သင်ရိုက်ထည့်တဲ့ Pin နံပါတ်ကို အနောက်မှာရှိတဲ့လူမမြင်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ Pin Shield ရှိတတ်ပါတယ်။ ပိုပြီးစိတ်ချရအောင် Pin ရိုက်တဲ့လက်ကို အခြားလက်တဖက်နဲ့ကာကွယ်ပြီးရိုက်ပါ။
Issuer Bank ရဲ့ ATM မှာပြုလုပ်တဲ့ On-Us Transaction အများစုဟာ Pin နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးပြီးခြင်း မှာပဲ Pin မှန်ကန်မှုရှိမရှိကို ဗဟိုကွန်ပျူတာစနစ် (Host) နဲ့ ချိတ်ဆက်စစ်ဆေးပါတယ်။ Host နဲ့ချိတ်ဆက်စစ်ဆေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ATM နဲ့တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်ရှိတာ Switch ဖြစ်ပြီး၊ Switch ကနေ လက်ခံရရှိတဲ့ Pin နံပါတ်ကို HSM နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Top Level Network ပုံလေးကိုပြန်ကြည့်ရင် HSM ဟာ ATM နဲ့ တိုက်ရိုက် အဆက်အသွယ်ရှိနေတာမဟုတ်ပဲ Switch ကတဆင့် ချိတ်ဆက်ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ သင်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ Pin နံပါတ်မှားတယ်ဆိုရင် Pin မှားကြောင်း message ကို Display မှာပြပေးပြီး နောက်တခေါက် ထပ်ရိုက်စေမှာပါ။ ဘဏ်အများစုဟာ Pin နံပါတ် ကို ၃ ခါဆက်တိုက် အမှားရိုက်ထည့်တာနဲ့ Card ကို Lock ချလိုက်မှာဖြစ်ပြီး၊ Pin အမှန်ကို ပြန်မှတ်မိရင်တောင်မှ Bank နဲ့ဆက်သွယ်ပြီး Card ကို Unlock ပြန်လုပ်ရမှာပါ။ ၃ ခါဆက်တိုက် Pin မှားရိုက်တယ်ဆိုတာကို ATM တလုံးချင်းမှာမှတ်တာမဟုတ်ပဲ ဗဟိုကွန်ပျူတာစနစ်မှာ မှတ်ထားတာ ဖြစ်လို့ မတူညီတဲ့ ATM ၃ လုံးမှာ Pin အမှား ၃ ခါရိုက်လည်း lock ကျမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pin နံပါတ်မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်တော့ ATM မှာ ရရှိနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစား စာရင်း (Transaction Menu) ကို Display မှာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ငွေထုတ်ဖို့အတွက် Withdrawal ခလုတ်ကို ရွေးချယ်ပြီး သင်အလိုရှိတဲ့ ငွေပမာဏကို အသင့်ထုတ်ယူလို့ရတဲ့ (Fast Cash) တွေကနေ သို့မဟုတ် Fast Cash မှာလိုချင်တဲ့ Amount မရှိရင် Other Amount ကိုရွေးချယ်ပြီး Amount ကို EPP ကနေရိုက်ထည့်ရပါမယ်။ Fast Cash Button (သို့မဟုတ်) Other Cash ရိုက်ပြီး Confirm Button နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ATM က သင်ငွေထုတ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေကို Switch ဆီလှမ်းပို့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် Switch က သင့်ကတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Account ကနေ ပိုက်ဆံထုတ်ဖို့အတွက် Core Banking ကို တောင်းဆိုပါတယ်။ Core Banking က သင့် Account မှာ ထုတ်ယူလိုတဲ့ပမာဏ ရှိမရှိစစ်ဆေးပြီး ရှိတယ်ဆိုရင် ထုတ်ယူမဲ့ပမာဏကို အရင်ဖြတ် (Debit) လိုက်ပြီးမှသာ Switch ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပြီးအကြောင်း Message Reply ပြန်ပါတယ်။ Core Banking ရဲ့ Message ကိုရရှိတာနဲ့ Switch ဟာ ATM ကိုပိုက်ဆံထုတ်ပေးဖို့ အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်။ Switch ရဲ့ အကြောင်းပြန်တဲ့ message ကိုရတာနဲ့တပြိုင်နက် ATM ကနေပိုက်ဆံထုတ်ပေးဖို့ Cash Cassette box ထဲက ပိုက်ဆံစတင်ဆွဲယူပါတယ်။ ငွေစက္ကူပုံးတွေထဲကနေ ပိုက်ဆံဆွဲယူတဲ့အခါမှာ Diebold, Wincor, GRG, စတဲ့ ATM Brand အများစုက Roller Fraction (Printer တွေမှာ စာရွက်ကို Tray ကနေဆွဲတဲ့ခါမှာ သုံးတဲ့နည်းပညာလိုမျိုး) ကိုသုံးပါတယ်။
NCR တံဆိပ် ATM တွေကတော့ ပိုက်ဆံပုံးထဲ ပိုက်ဆံကို (ကားမှန်တွင်နေကာကပ်တဲ့ခါသုံးတဲ့ ရာဘာစုပ်ခွက်ပုံစံမျိုး စုပ်ခွက်လေးတွေကိုသုံးပြီး) လေအားနဲ့ ဆွဲယူပါတယ်။
ငွေစက္ကူတရွက်ချင်းဆီကို Currency Box အသီးအသီးကနေ Vacuum စနစ်နဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတာနဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ ပျမ်းမျှအထူစစ်ဆေးတဲ့ အာရုံခံကိရိယာ (Sensor) တွေကိုဖြတ်ပြီး Stacker ဆိုတဲ့နေရာမှာ စီထပ်လိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ပမာဏကို Stacker မှာစီထပ်ပြီးတာနဲ့ ငွေစက္ကူအထပ်လိုက် (Bunch of notes) ကို Transport လို့ခေါ်တဲ့ ငွေထုတ်ပေးမဲ့ လမ်းကြောင်းထဲကိုတင်ပေးလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဘဏ်အများစုက Card First စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး၊ Card ကိုအရင်ထုတ်ပေးပါတယ်။ သင်ကတ်ယူလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် Transport ထဲမှာ အသင့်ရှိနေတဲ့ ငွေစက္ကူတွေဟာ ငွေထွတ်တဲ့တံခါး (Cash Exit Shutter) ကနေ ထွက်လာမှာပါ။ တချို့ဘဏ်တွေကတော့ Cash First စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး၊ ကတ်နောက်တခါပြန်ထည့်စရာမလိုပဲ နောက်ထပ် Transaction လုပ်နိုင်တဲ့ Transaction Chaining အသုံးပြုခွင့်ပေးပါတယ်။
၅။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ATM ကွန်ရက်
သင် Account ဖွင့်ထားတဲ့ဘဏ်ရဲ့ ATM စက်တွေ အနီးအနားမှာမရှိလို့ အခြားဘဏ်ရဲ့ ATM ကို အသုံးပြုပြီး ငွေထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ MPU Network ကိုဖြတ်ပြီးသင့်ဘဏ်ကိုဆက်သွယ်လို့ ငွေထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်က ဘဏ်(၁) မှာ Account ဖွင့်ထားပြီး၊ ဘဏ်(၂) ရဲ့ ATM မှာ ငွေထုတ်တယ်ဆိုကြပါဆို့။ သင်ကတ်ထည့်လိုက်တာနဲ့ ဘဏ် (၂) ရဲ့ ATM ကသင့်ကတ်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို ဘဏ်(၂) ရဲ့ ဗဟိုကွန်ပျူတာစနစ် (Host) နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့မှာရှိတဲ့ ကြိုတင်ရေးသားထားတဲ့ Program နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်ဆေးပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ဘဏ်(၂) ရဲ့ ATM စနစ်ဟာ သင့်ကတ်ကို အခြား MPU အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်ရဲ့ကတ်ဆိုတာ စစ်ဆေးသိရှိသွားတာနဲ့ သင်ရယူမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ATM မှာ ဆက်လက်တောင်းခံပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ On-Us Transaction နဲ့မတူတာက သင့်ရဲ့ Pin မှားမှားမှန်မှန် ချက်ချင်းမစစ်ဆေးသေးပဲ Transaction Menu ကိုပြသပေးမှာပါ။ နောက်ဆုံး သင်က ပိုက်ဆံထုတ်ဖို့ Withdrawal ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး လိုချင်တဲ့ငွေပမာဏကိုတောင်းဆိုလိုက်ပြီဆိုမှသာ စုစောင်းရယူထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအားလုံးကို MPU Switch ဆီကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ MPU Switch ကနေမှ သင် Account ဖွင့်ထားတဲ့ ဘဏ်(၁) ရဲ့ Switch ကိုဆက်သွယ်ပြီး ကျန်တဲ့ အပိုင်းတွေကို ဆက်စစ်ဆေးပါတယ်။ သင့်အကောင့်ထဲမှာလည်း သင်ထုတ်ချင်တဲ့ ငွေပမာဏရှိမယ်၊ သင်ရိုက်ထည့်တဲ့ Pin Number လည်းမှန်တယ်ဆိုရင် သင့်ထုတ်လိုတဲ့ ငွေပမာဏကို အရင်ဖြတ်လိုက်ပြီး၊ MPU ကို ငွေထုတ်ပေးဖို့ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းပြန်ပါတယ်။ MPU ကနေမှ ဘဏ်(၂) ရဲ့ Switch ကို ငွေထုတ်ပေးဖို့ အကြောင်းထပ်ပြန်ပါတယ်။ ဘဏ်(၂) ရဲ့ Switch က MPU ရဲ့ Message ကိုရရှိတာနဲ့ ၄င်းရဲ့ ATM ကို ငွေထုတ်ပေးဖို့ အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဘဏ်(၂) ရဲ့ ATM က Switch ရဲ့ Authorization Response ကို ရရှိတဲ့အခါကြမှသာ သင့်ကိုငွေထုတ်ပေးမှာပါ။
၆။ သင်ပိုက်ဆံမရပဲ Account ထဲကငွေဖြတ်ခံရင် ဘာလုပ်မလဲ???
အပေါ်မှာသင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ATM စက်ကနေ သင့်ရဲ့ ဘဏ် Account ရှိတဲ့ Host ကိုဆက်သွယ်ဖို့ အဆင့်ဆင့်သွားရတာပါ။ ATM ကနေ ငွေထုတ်ဖို့ Request စလွတ်လိုက်တာနဲ့ Host ရဲ့ Reply ပြန်လာတာကိုစောင့်မဲ့ အချိန်ကာလရှိပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် Host ရဲ့ Reply ကိုစောင့်ရမဲ့အချိန်ဟာ ဘဏ်ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ၄၅ စက္ကန့်ကနေ၊ ၉၀ စက္ကန့်အထိရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာ Reply မရောက်လာခဲ့ရင် Transaction timeout ဖြစ်ပြီး ကတ်ကိုပြန်ထုတ်ပေးမှာပါ။
အကယ်၍များ တဖက်မှာ Host က သင့်ပိုက်ဆံကို ဖြတ်ပြီးနောက်မှာမှ အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် (ဥပမာ၊ Network ကျတာမျိုး) ATM ဆီ Reply ပြန်လိုက်တဲ့ message မရောက်လာခဲ့ရင် သင်ငွေမရပဲ Account ထဲကငွေဖြတ်ခံရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် Network ပြန်ချိတ်ဆက်မိတာနဲ့ သင့်ကို ငွေထုတ်မပေးလိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းကို ATM ကနေ Host ကို အကြောင်းကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ သင်အဖြတ်ခံရတဲ့ငွေကို Host က ပြန်ထည့်ပေးမှာပါ။ Authorization Response ရပြီးမှ ငွေထုတ်မပေးနိုင်တဲ့ အခြား ဖြစ်နိုင်ခြေ အနည်းငယ်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီ ငွေမထုတ်ပေးလိုက်ကြောင်း Message (Reversal) message ကို ATM က ချက်ချင်းမပို့ပေးနိုင်ခင်မှာ သင့်အနေနဲ့ Account ထဲကိုငွေပြန်ဝင်လာဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ Bank ရဲ့ Call Center ကို ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သင်မသိလိုက်ပဲ Account ထဲက ငွေဖြတ်သွားတဲ့ ကိစ္စမျိုးမရှိရအောင်လည်း ငွေမထုတ်ခင်မှာ လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးတာမျိုး၊ ATM မှာပဲ စာရင်းရှင်းတမ်း (Mini-Statement) စစ်တာမျိုး နဲ့ Internet Banking နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Transaction List တွေကို စစ်ဆေးတာမျိုးတွေကို ဂရုပြု လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ ATM ဟာ Host နဲ့အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ပြီးမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ Interactive Machine တခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငွေသားတွေအများကြီး ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ထည့်ထားတာထက် လိုအိပ်တဲ့အချိန်ထုတ်ယူနိုင်တဲ့ ATM ကတ်နဲ့ ATM စက်တွေအများအပြားရှိလာတာ ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ တခါတလေ ATM တွေလိုင်းကျတတ်လို့ အဆင်မပြေမှုလေးတွေရှိတတ်ပေမဲ့ တနေ့ထက်တနေ့ အဆင်ပြေ ကောင်းမွန်လာတာကို တွေ့မြင်နေရပါပြီ။ ATM Card တွေနဲ့ ပေးချေလို့ရတဲ့ စားသောက်ဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်နဲ့ SuperMarket တွေလည်း ပိုပိုပြီးတိုးပွားလာနေပြီဖြစ်ပြီး မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာ ပိုပြီးတော့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလာကြတော့မှာဖြစ်လို့ ငွေတွေ Card ထဲကထုတ်ပြီး ငွေသား (Cash) နဲ့မရှင်းပဲ Card နဲ့ ငွေပေးချေကြည့်ဖို့ကိုလည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
This Article is Contributed by Zaw Phyo Oo
Android Device အတွက် ADB နဲ့ Fastboot အသုံးပြုနည်းများ
How It Works ATM Automated Teller Machine Machine Bank Online Banking